Frequently Asked Questions – National Museum
राष्ट्रिय संग्रहालय कहिले, कुन बार र कुन समयमा खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ ?
संग्रहालय खोल्ने समय
माघ १६ गतेदेखि कार्तिक १५ गतेसम्म बिहान १०:३० देखि ४:३० बजेसम्म ।
कार्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म बिहान १०:३० देखि ३:३० बजेसम्म ।
प्रत्येक सोमबार बिहान १०:३० देखि २:३० बजेसम्म ।
शनिबार संग्रहालय खुल्ला रहने छ ।
मंगलबार र सार्वजनिक बिदाको दिन संग्रहालय बन्द रहने छ ।
राष्ट्रिय संग्रहालयको प्रवेश शुल्क दर कति रहेको छ ?
नेपाली विद्यार्थी रु १०।–
नेपाली दर्शक रु २५।–
डिजिटल क्यामरा रु ५०।–
भिडियो क्यामरा रु १००।–
दर्शक : रु ५०।–
डिजिटल क्यामरा : रु ७५।–
भिडियो क्यामरा : रु १५०।–
अन्य राष्ट्रका दर्शक
दर्शक : रु १५०।–
डिजिटल क्यामरा : रु १००।–
भिडियो क्यामरा : रु २००।–
३) संग्रहालयको प्रवेश टिकट काउन्टर कति बजेसम्म खुल्ला रहने छ ?
संग्रहालयको प्रवेश टिकट काउन्टर संग्रहालय बन्द हुनुभन्दा ४५ मिनेट अगाडिसम्म खुल्लारहने छ ।
४) राष्ट्रिय संग्रहालयमा आउने विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था छ कि छैन ?
संग्रहालयमा आउने विद्यार्थीहरुलाई हरेक शनिबार विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयको अनुरोध पत्र लिएर आएको खण्डमा संग्रहालयमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । तर शनिबार बाहेक अरु दिनमा संग्रहालय प्रवेश गर्दा विद्यार्थीलाई रु १०।– को टिकट काटेर संग्रहालयको भ्रमण गर्न सकिने छ ।
५) संग्रहालयको प्रवेश टिकट अनलाइनबाट Payment गर्न सकिन्छ ?
हाललाई यो सेवाको व्यवस्था गरिएको छैन । तर निकट भविष्यमा चाँडै नै यो सेवालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएका छौं ।
६) संग्रहालय प्रवेश गर्दा के कस्तो नियमहरुको पालना गर्नुपर्दछ ?
संग्रहालय अवलोकनकर्ताहरुले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता
संग्रहालय हाताभित्र प्रवेश गर्दा टिकट आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ ।
संग्रहालय अवलोकनकर्ताले आफ्नो सानो पर्स बाहेक अन्य सामानहरु तोकिएको लकरमा राख्नुपर्ने छ । बहुमूल्य सामान भएमा सोको जिम्मा आफैंले लिनुपर्ने छ । र लकर सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेको छ ।
संग्रहालयभित्र कुनै पनि हातहतियार तथा जनावर लिई प्रवेश गर्न पाईने छैन ।
संग्रहालयभित्र मादक पदार्थ तथा धुम्रपान गर्न सख्त निषेध गरिएको छ ।
संग्रहालयभित्र गालीगलौज, हुलहुल्जत गरि वातावरणलाई खलबल्याउन पाईने छैन ।
संग्रहालयमा तोकिएको स्थानमा मात्र फोहोर मैला फाल्नु पर्नेछ ।
संग्रहालयभित्र प्रर्दशनमा रहेका वस्तुहरु हातले छुने, कोट्याउने जस्ता क्रियाकलाप गर्न सख्त निषेध गरिएको छ ।
स–साना बालबालिकाहरु लिएर संग्रहालय अवलोकन गर्न आउनु हुने अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाको सुरक्षा आफैंले गर्नुपर्ने छ ।
सवारी साधन तोकिएको स्थानमा मात्र पाकिङ्ग गर्नु पर्नेछ ।
७) दर्शकहरुबाट संग्रहालयमा प्रदर्शित वस्तुहरु टुटफुट भएमा के कस्तो दण्ड सजायको व्यवस्थागरिएको छ ?
दर्शकहरुबाट संग्रहालयमा प्रदर्शित वस्तुहरु टुटफुट भएमा उक्त सामाग्रीहरुको मूल्याकंन गरि सम्बन्धित व्यक्तिहरुबाटै सोको क्षतिपूर्ति गराइने छ । साथै नेपाल सरकारको नियमानुसार दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने छ ।
८) संग्रहालय भ्रमणको लागि गाइडको व्यवस्था छ कि छैन ?
संग्रहालयको प्रशासन शाखामा गाइड सम्बन्धित व्यवस्था गरिदिनु हुन भनि जानकारी प्राप्त हुन आएमा गाइडको व्यवस्था गरिने छ ।
९) संग्रहालयमा प्रदर्शित रहेका वस्तुहरुको प्रतिमूर्ति (Replica), प्रकाशित पुस्तक तथा सामाग्रीहरु खरिद गर्ने व्यवस्था छ कि छैन ?
संग्रहालयमा प्रदर्शित रहेका वस्तुहरुको प्रतिमूर्ति (Replica), प्रकाशित पुस्तक तथा सामाग्रीहरु खरिद गर्न सक्नु हुन्छ । यसको लागि तपाईले संग्रहालय पसल वा टिकट काउन्टरमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ ।
१०) संग्रहालय सम्बन्धित आवश्यक सूचनाहरु कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
संग्रहालयले तोकेको सूचना अधिकारीबाट संग्रहालय सम्बन्धित सूचनाहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
११) संग्रहालयमा हुने विभिन्न गतिविधिहरुलाई के कस्तो माध्यमबाट जानकारी पाउन सकिन्छ ?
संग्रहालयमा हुने विभिन्न गतिविधिहरुलाई निम्न माध्यमहरुबाट जानकारी पाउन सकिन्छ ।
Website : nationalmuseum.gov.np
Facebook Page : National Museum of Nepal
Instagram : National Museum of Nepal
YouTube : National Museum Of Nepal
Twitter : National Museum of Nepal
१२) संग्रहालय परिसरभित्र रहेको संग्रहालय पुस्तकालयमा कसरी र कुन समयमा जान सकिन्छ ?
संग्रहालय पुस्तकालयमा कार्यालय समयभित्र आफूले चाहेको विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्नु हुनेछ । साथै संग्रहालयको वेभसाइटमा राखिएका Library catalogue हेरेर पनि पुस्तकालयमा Visit गर्न सक्नु हुनेछ । तर पुस्तकहरु भने आफू सँगै लग्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।
१३) संग्रहालयमा विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि Intern गर्नेव्यवस्था गरिएको छ कि छैन ?
संग्रहालयमा विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि Internगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको लागि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको Internship को पत्र ल्याई प्रशासन शाखामा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त भएका पत्रहरुको आधारमा निर्णय गरि संग्रहालयले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाहरुलाई थप जानकारी गराइने छ ।
१४) के संग्रहालयमा रहेको तीन वटा प्रदर्शित भवनका सबै कक्षहरुमा फोटो खिच्न सकिन्छ ?
संग्रहालय परिसरभित्र रहेको जुद्धजातिय कलाशालामा रहेको चित्रकला कक्ष बाहेक अरु सबै कक्षहरुमा प्रदर्शित वस्तुहरुलाई वाधा नपुग्ने गरि फोटो खिच्न सकिन्छ ।
१५) संग्रहालय परिसरभित्र Photoshot, Videoshotगर्न अनुमति छ कि छैन ?
संग्रहालयले तोकेको टिकट दर तिरेपछि Photoshotतथा Videoshotगर्न सक्नु हुनेछ ।
Museum Visiting Time
Magh 16 to Kartik 15 (February to October) : 10:30 am to 4:30 pm.
Tickets Counter will be open on Magh 16 to Kartik 15 (February to October) until 4:00 PM
Kartik 16 to Magh 15 (November to January) : 10:30 am to 3:30 pm.
Tickets Counter will be open on Kartik 16 to Magh 15 (November to January) until 3:00 PM
Every Monday :10:30 to 2:30 p.m.
Ticket Counter will be open on Monday until 2:00 PM
Total Visits: 38485